Amaanka Xaafada Eastleigh ee magaalada Nairobi oo faraha ka baxay & gabdho Soomaaliyeed oo la kufsaday (Dhegayso) – Radio Daljir
Amaanka Xaafada Eastleigh ee magaalada Nairobi oo faraha ka baxay & gabdho Soomaaliyeed oo la kufsaday (Dhegayso)
Nofeembar 19, 2012 11:29 b 0
Nairobi Nov 19, Kadib qarax khasaare geystey oo shalay ka dhacay Xaafadda Eastleigh?ee magaaladda Nairobi ayaa waxaa maanta guud ahaanba faraha ka baxay amaanka Xaafadda Eastleigh ee degmada kaamakuuji Waxaa Xirmay guud ahaan ganacsiga magaaladda, kooxo shufto ah uu madow ayaa ugaarsi ku bilaabay Soomaalida.
Dad badan ayaa loo geystey dhaawacyo halis ah sidoo kale waxaa fal fool xumo ah oo kufsi ah lagula kacay gabdho Soomaaliyeed oo tiradood dhan tahay 9 waxaana ciidanka Bilayska oo isku dayay inay xakameeyaan arinta ay ku guuldaraysteen xasilinta Xaafadda Eastleigh.
Sidoo kale Culimadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaaladda Nairobi ? ayaa shir jaraaid oo ay galabta ku qabteen Xaafadda Eastleigh waxay kaga hadleen falalka fuusha xun ee loo geystey Shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Kenya.
Culimada waxay baaq u direen shacabka Soomaalida inay isdifaacaan oo aysan cararin, Sh Maxamed Ibraahim Shakuul oo kamid ah culimada waaweyn ee Soomaalida ayaa uga waramay Radio Daljir dhacdooyinkii u danbeeyey iyo halka hada wax marayaan.
Xaalad kacsanaan ah oo wali ka jirta Islii, iyo bilayska oo wada hawlgalo amni-sugid..